Mi Account Remove / Unlock Tool | Hein Htet Kyaw
Mi Account Remove / Unlock Tool
In Xiaomi, နည်းပညာTags Xiaomi, နည်းပညာ နိုဝင်ဘာ 13, 2017 109 Views
မရေးရတာကလဲ အတော်ကိုကြာနေပြီ မရေးဖြစ်ဆိုရင်လဲ ဘာရေးရမယ်မှန်းမသိလို့ မရေးဖြစ်တာပေါ့လေ :3 ရေးလိုက်ရင်လဲ ရေးရင်ကောင်းမလား မကောင်းဘူးလား စဉ်းစားလိုက်နဲ့ဆိုတော့ မရေးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ ရေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကို စဉ်းစားမိပါသော်လည်း IQ တွေ EQ တွေ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုပြန်ထောင်းနေရသလိုလို စကားနည်းနည်းပြော များများသိလေဆိုသလို ကိုယ့်စကားတွေ အသိတွေက လွဲမှားသွားမှာကလဲ ကြောက်ရတာကို။ ဒါကတော့ မရေးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေထဲကမှ စကားချီ ! ဒီလိုပါပဲ ပြောချင်တာပြောပြီး Off Topic ဖြစ်အောင်လုပ် ကိုယ်ရေးချင်တာကို ရေးလိုက်တာတွေများနေတော့လဲ … ကဲ ဒီတစ်ခါ ပြန်မျှပေးချင်တာကတော့ bill ၃၀၀၀ မက ဖြုန်းတီးပြီးတော့မှ ရလာတဲ့ ဗဟုသုတလေးပေါ့လေ ကိုယ့်မှာ တိုင်တွေ ပတ်ချက်ပတ်ချက်ဆိုတာ အခုပြောပြမယ့်ဟာကို မတွေ့ရခင်တော့ ခေါင်းတွေလဲကိုက် Coffee ကလဲ ၂ ခွက်ကုန် ( သောက်ချင်လို့သောက်တာ ) ဒီကြားထဲ File မှားဒေါင်းတာကလဲ ပါသေးတယ်ကို ကဲထား အဲဒါကို အခု Tool ကတော့ Recovery ကနေပြီးတော့ Firmware ပြန်ချပြီးတော့ အကောင့်ဖြုတ်တဲ့နည်း
မသိခင်ကတော့ လိုက်ရှာလိုက်ရတာ တွေ့သမျှကလဲ edl ( Emergency Download mode ) ကနေပြီးတင်ရမယ်တဲ့ ခက်တာကလဲ အဲဒီ EDL ကို ဝင်လိုက်ရင် Device က Auto Reboot ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပဲ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ သေချာမသိဘူး :3 edl ကိုဝင်နည်းက ၇ နည်းရှိတဲ့ အထဲ ၅ ခုစမ်းတယ် အဆင်မပြေဘူး ( Googling အရ ) ဒါနဲ့ပဲ လိုက်ရှာရင်း အခုနည်းတွေ့တယ်ပေါ့လေ ကိုယ့်လို အချိန်ကုန် ပိုက်ဆံမကုန်ရလေအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးလိုက်ရမှာပေါ့လေ။
ကိုယ်ဟာ ကြော်ငြာတွေကိုမုန်းသလောက် လိုရင်းကိုမရောက် ဟိုပြောဒီပြောတတ်တဲ့အကျင့်လေးတစ်ခုကလဲ ရှိနေတော့ ထူးဘူး ဆက်သာဖတ်တော့။
ဟော လာပါပြီဗျာ အခုပြောမယ့်အရာကတော့ Xiaomi Recovery Mode ကနေပြီးတော့ Firmware ချတဲ့ နည်းပေါ့ဗျာ Firmware Reset သဘောမျိုး အကုန်ပျက်ပဲ အခုသဘောတရားကလဲ Huawei တို့ဘာတို့ မှာအဖြစ်များတာကို Account မသိတော့တာတို့ Google Account ရှိနေတာတို့ ကိုယ်က မသိတော့ရင် Reset သာလုပ်လိုက် ( တစ်နည်းအားဖြင့် Clear Data ) လုပ်လိုက်ပြီး အကောင့်ကိုဖျက်တဲ့ နည်းပေါ့လေ ရှိသမျှ အကုန်ပြောင်ပဲ ဒါကလဲ နားအေးတဲ့အချက်ပဲကို။
ဒီအချက်ကို အစတုန်းက မစဉ်းစားခဲ့မိဘူး အတတ်ကျူးတော့ အရူးဖြစ်ဆိုသလိုပေါ့ Firmware ကိုပြန် Flash မယ်ပေါ့လေ မရဘူး ဒါနဲ့ပဲ တွေ့မှ ဪ ဟုတ်သားပဲ ဒီနည်းလဲလဲ ရှိသေးတယ်ပေါ့လေ ပြန်စဉ်းစားမိပြန်တော့လဲ Mi ကိုတစ်ခါမှတော့ မလုပ်ဖူးဘူး တစ်ခါလုပ်ဖူးတာကလဲ Root ရှိတော့ adb ကနေလုပ်တဲ့နည်းနဲ့ဆိုတော့ မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူး xD ဟော ကြည့် ကိုယ့်ပေါင်ကို ပြန်လှန်ထောင်းနေရသလိုပါဆို ကိုယ်ပိန်းတာကို ချပြနေရသည့်အတိုင်းပဲ။ ဒီနည်းကိုတော့ အင်ဒိုက Unbrick ဆိုတဲ့ Dev ကနေပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့လေ အခြားဟာတွေလဲရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမယ့် ဒီနည်းက သူ့စီကရတော့ သူ့ Idea ပေါ့လေ။
ကဲ စရရင်တော့ အရင်ဆုံး ဖုန်းကို Power Off လိုက်ပါ ဖုန်းပါဝါကိုပိတ်ပေါ့လေ ပြီးရင်တော့ Vol Up ( + ) Key နဲ့ Power လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ Recovery ကိုရောက်သွားပြီပေါ့လေ ကျွန်တော်စမ်းထားတာကတော့ Mi Note3ဆိုတော့ကာ … ချက်ခြင်းရောက်သွားတယ်ပေါ့လေ အခြားဟာတွေကတော့ မရောက်ရင် Connect Assistance ဆိုလားဘာလားပေါ့ ကွကိုယ်နည်းနည်းရှာကြည့်လိုက်ပါ အချို့ဟာတွေကတော့ Recovery ထဲမှာကိုပဲ Clear Data လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ကာ … ( Recovery မှာတစ်ခါထဲလုပ်မရတဲ့လူတွေက ဆက်ဖတ်ပေါ့ ) ဘာလိုသေးလဲပေါ့နော်။ ဘာလိုနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ Account Unlock Tool လေးနဲ့ ဆက်သွားကြပေါ့ဗျာ။
ပထမဦးဆုံးမှာတော့ Information ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Computer နဲ့ Phone Connect ဖြစ်မဖြစ် စစ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ ဖြစ်သွားရင်တော့ … Information တွေကျလာလိမ့်မယ်ပေါ့လေ ကျလာရင်တော့ Bypass Mi Account ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Phone မှာ Update လုပ်သလို Loading လေးပြေးပြီးသွားရင်တော့ Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ဆိုင်လား မဆိုင်သလားတော့ မသိရပေမယ့် ဒီနေရာမှာ SIM card ကိုခဏဖြုတ်ထားပါ အင်တာနက်ကိုလဲ ခဏပိတ်ထားပြီးတော့ Your’e Rock ! ဆိုလား အဲဒီအထိရောက်အောင် မြန်မြန်ရောက်နိုင်သမျှရောက်အောင်သာသွားပါ 😛 ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းကိုပိတ်ပါ SIM card ပြန်ထည့်ပါ။ Power ပြန်ဖွင့်ပါ ဒန်တန့်ဒန်လို့ရပြီပေါ့ဗျာ 😛 ကိုယ်ဖြုတ်တုန်းကတော့ ပြုတ်သွားတာပဲဗျ ခင်ဗျားတို့ ဖြုတ်မှ မပြုတ်ရင်တော့ မတတ်နိုင်ဘူး 😛 ( ဟုတ်တယ်လေ ပြန်မျှလဲ မျှရသေးတယ် အဆဲတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကာ )
ဪ ဘာလိုလိုနဲ့ ၃၀၀၀ နဲ့တန်လိုက်တဲ့ ဗဟုသုတ တစ်ခုပေါ့လေ ကိုယ့်မှာ သူများစီကမေးရတာကလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးနေရတဲ့အတိုင်းပဲ ပြန်ကိုမဖြေတော့ဘူး :3 လူတိုင်းဟာ ကိုယ်နဲ့ အများကြီးမတူကြပေမယ့် ကိုယ့် စိတ်အချို့နဲ့တော့ တော်တော်လေးကို ထပ်တူပဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ် :3 ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။ မရေးဖြစ်တာကြာပြီ ဆိုပေမယ့်လဲပေါ့နော် အခုလိုအရာတွေ အများကြီးတွေ့ရင်တော့ အများကြီးရေးနိုင်မှာဆိုတာ သေချာနေတော့လဲ Problem များများဖြစ်ပါစေလို့သာ ဆုတောင်းပေးပေ့ါဗျာ Bill လေးလဲ များနိုင်သမျှ များအောင်ပေါ့လေ 😀
Unlock_MI_Account_By_UnBrick.ID | MiFlashSetup ( Driver )
Bootloader Unlock Mi5s
ဧပြီ 27, 2018
roll back to Window!!!
ဧပြီ 29, 2017
5 comments On Mi Account Remove / Unlock Tool
ဇူလိုင် 22, 2018 at 6:08 မနက် - Reply
can’t open please helpme
ဇူလိုင် 23, 2018 at 9:29 မနက် - Reply
ဩဂုတ် 5, 2018 at 12:11 မနက် - Reply
Red mi ဘယ္​ model​ phit phitasin pyay lar
စက်တင်ဘာ 11, 2018 at 12:02 ညနေ - Reply
Mi note3လုပ္​တာ အဆင္​မေျပဘူးျဖစ္​ေနတ္​ယ reboot မတက္​ ျပန္​ပိတ္​ဖြင္​့ mi account ျပန္​ေမးတ္​ ကူညီေပးပါီး ဥယ
နိုဝင်ဘာ 17, 2018 at 4:48 ညနေ - Reply
mi 5A info ျပတယ္ Bypass အလုပ္လုပ္ restartက်သြားတယ္ ျပန္တက္လာေတာ့ဒီအတုိင္းပဲ လမ္းညႊနိေပးပါဦးခင္ဗ်